အာသံမျောက် ကို တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့တွင် တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ နဖူးနှင့် ငယ်ထိပ်နေရာ ကျဉ်းမြောင်းနေပြီး ဦးခေါင်းထိပ်ရှိ အမွှေးများမှာ ဘီးဖြင့် တစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ ခွဲခြားပြီး ဖီးထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ကျောဘက် နှင့် ဘေးဘက်ရှိ အမွှေးများမှာ အနီရောင်၊ အညိုရောင် နှင့် အနက်ရောင် တို့ဖြင့် ကွဲပြားသော အရောင်အမျိုးမျိုး ရှိနေနိုင်သည်။
၃ ဂေဟပညာနှင့် အမူအကျင့်
အာသံမျောက်များသည် နေ့ဘက် ကျက်စားသော သတ္တဝါ (diurnal animal)များ ဖြစ်ပြီး၊ သစ်ပင်နေ (arboreal)နှင့် မြေကြီးနေ (Terrestrial animal) သတ္တဝါများ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အစုံစား သတ္တဝါ (omnivorous)များ ဖြစ်ကာ၊ သစ်သီး၊ သစ်ရွက်၊ ကျောရိုးမဲ့ အကောင်ပလောင်များနှင့် အစေ့အဆန်များကို စားသောက်သည်။ အာရုနချာ ပရာဒက် ပြည်နယ်၊ နံဒါဖာအမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် မျောက် ၂၀၉ ကောင်သည် အုပ်စု ၁၅ စု ခွဲ၍ နေထိုင်ကြောင်း ၂၀၀၂ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အုပ်စု တစုလျှင် ပျမ်းမျှ ၁၃.၉၃ ကောင် ပါသည်။ ၂၀၀၇ တွင် နီပေါ၊ လန်ထန်အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် စစ်တမ်း ကောက်ရာ၊ စုစုပေါင်း အာသံမျောက် ၂၁၃ ကောင်ကို လေ့လာနေသော မြေဧရိယာ ၁၁၃ km2 (၄၄ sq mi) အတွင်း၌ အုပ်စု ၉ ခု ခွဲနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အုပ်စုအရွယ်အစားမှာ ၁၃ ကောင်မှသည် ၃၅ ကောင်အထိ အမျိုးမျိုး တွေ့ရပြီး၊ ပျမ်းမျှ အုပ်စု အရွယ်အစားမှာ ၂၃.၆၆ ကောင် ဖြစ်ကာ၊ အမ ၃၁%၊ အထီး ၁၆% နှင့် သူတို့၏ ကလေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အကြိုက်ဆုံးမှာ ပြောင်းဆန်များ၊ ဒုတိယမှာ အာလူးများ၊ သို့သော် ဂျုံမျိုးဝင် အစာများလည်း ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ 
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.)။ Baltimore: Johns Hopkins University Press။ p. 161။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ ၆.၀ ၆.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named iucn
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာသံမျောက်&oldid=665646" မှ ရယူရန်
၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၂၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၂၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။